Bizzabo: Ku Karti Qofkaaga Shaqsi ahaaneed iyo Dhacdooyinkaaga Farshaxan ee Madal Kaliya | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 2, 2020 Jimco, Oktoobar 2, 2020 Douglas Karr
Bizzabo waa madal guul dhacdo oo siisa kooxdaada dhammaan aaladaha ay u baahan yihiin si ay u abuuraan dhacdooyin wax ku ool ah halka ay ku soo bandhigayaan aragtiyo si ay uga caawiyaan dhacdooyinkaaga inay u koraan siyaabo aadan waligaa u maleyn inay suurtagal yihiin.
Qalabka Bizzabo Event Platform
Bizzabo oo dhan-in-mid software dhacdo waxay awood u siisaa shaqsi ahaan iyo dhacdooyin dalxiis ah si ay ugu gudbiso khibradaha ka soo qayb galayaasha gaarka ah iyadoo loo marayo kaqeybgal shakhsi ahaaneed oo caqli gal ah
Diiwaangelinta Dhacdooyinka - si buuxda ugu abaabulo booqdahaaga khibradda kaqeybgalayaasha foomamka hodanka ah iyo kuwa cajiibka ah, noocyada tikidhada badan.
Websaytka Event - dhis degel munaasabad sumad leh oo leh tifaftire awood leh oo si buuxda ugu dhexjira barnaamijka diiwaangelinta dhacdada iyo barnaamijka dhacdada.
La xiriir - U dir casuumaadaha emaylka iyo ololeyaasha dhiirrigelinta ee kaxeeya xiisaha iyo diiwaangelinta iyadoo la kaashanayo waxyaabaha shakhsi ahaaneed.
Ka qaybgal - riix ogeysiisyada, isku xirka hal-hal, ajandaha isdhexgalka, iyo codbixinta tooska ah dhammaantood waxay si wada jir ah u wada shaqeeyaan si ay uga soo qeyb galayaashaadu u mashquulaan-labadaba iyo dibedda barnaamijka dhacdooyinka moobiilka.
Kala baxaan - Sii kafaala-bixiyeyaashaada fursado gaar ah, oo ay ku jiraan shaashado si gaar ah loo buufiyo, dalabyo gaar ah, ogeysiis riix si otomaatig ah qeylo-dhaan ah, tiers-yada kafaalaqaadka, iyo xogta si sax ah loogu cabbiro kafaala-qaadaha ROI.
Warbixinta - Warbixinta qotada dheer waxay u sahlaysaa kooxdaada inay fahmaan sida dhacdooyinku u socdaan marka la barbar dhigo jaangooyooyinka. Hadaf dejiso, lasoco dakhliga iyo kaqeybgalka, iyo inbadan.
Bizzabo waxay ka caawisaa shirkadaha inay cabiraan, maareeyaan, oo ay cabiraan dhacdooyinka ku wajahan natiijooyinka ganacsiga muhiimka ah - awood siinta qabanqaabe kasta, suuqle, soo bandhige, iyo ka soo qeyb galayaasha si ay u soo bandhigaan awooda dhacdooyinka xirfadeed.
Dhacdooyinka Bizzabo Virtual
Bizzabo waxay ka caawisaa shirkadaha inay gaaraan kartida buuxda ee ka-qaybgalka dhagaystayaasha khibradaha jira (ku dhowaad) saameyn ugu leh sida dhacdooyinka qof ahaaneed, meel kasta oo ay kaqeybgalayaashaadu joogaan. Xalintooda dhamaadka-dhamaadka, waxaad awood u leedahay inaad ku soo bandhigto warbaahin tayo sare leh iyo fiidiyowyo dalab ah oo cabbirkoodu yahay xalka fasalka shirkadaha. Astaamaha waxaa ka mid ah:
Toos u sii soco dhacdooyinka oo dhan ama kal-fadhiyo gaar ah dhagaystayaasha caalamiga ah ee cabir kasta ha lahaadee barnaamij madal fiidiyoow ah, kuna shaqeeya Kaltura.
Lagu dhisay heerarka ugu sareeya ee amniga iyo heerarka asturnaanta si loo hubiyo in xogtaada la ilaaliyo oo loo hoggaansamo xeerarka.
Kordhi dakhliga kafaala-qaadka leh xayeysiinta fiidiyowga ah ee meeleynta kafaala-qaadka dhammaan dhacdadaada.
Kordhi Bizzabo xalka dalwaddii oo ku xir tiknoolajiyada fiidiyowga ah ee aad dooratay.
Bizzabo Waxay kaloo Bixisaa Adeegyo Wax Soo Saar Virtual ah
Kooxda Bizzabo ee Adeegyada Waxsoosaarka Waxsoosaarka ah waxay bixisaa adeegyo aakhiro-ilaa-dhammaad iyo isugeyn leh oo ay ku jiraan wax soo saar buuxa, maqal iyo muuqaal, qaabeyn, hirgelin, iyo inbadan.
Laga soo bilaabo diyaarinta ku hadla iyo dhexdhexaadiyayaal ilaa baahin si heer sare ah loo soo saaray, Bizzabo waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo ku habboon baahiyahaaga dhacdada.
Bizzabo waxay awood u siisaa munaasabadaha noocyada sida Forbes, Hubspot'INBOUND, Dow Jones, Gainsight, iyo qaar kaloo badan. Shirkadda waxaa aasaasay Boaz Katz, Alon Alroy, iyo Eran Ben-Shushan, waxayna leedahay in ka badan 100 shaqaale ah xafiisyada New York iyo Tel-Aviv.
Tags: bizzabobarnaamijka shirkashirka suuq geyntaxiriirka bulshada